11 novembre 2020 · déliremadagascar
Archives journalières 11 novembre 2020
CNAPS: Mahazo fampiofanana arak’asa maimaim-poana ireo very asa
Ho tohin’ny fanampiana ireo mpikambana ao amin’ny CNAPS ka very asa noho Covid-19 dia teraka ny fiarahamiasan’ny CNAPS amin’ny CENAM, CCIFM, CDA ary ny MPE. Tontosa ny 11 novambra 2020 teny Ampefiloha ny fifanaovan-tsoniam-piarahamiasa teo amin’izy ireo. Continuer la lecture →
Televiziona nomerika natao ho an’ny ankohonana rehetra. Ny Startimes no nibata ny “amboara ho an’ny marika TNT mivoatra indrindra” ka natolotra azy nandritra ny lanonana “Brands and Advertising Excellence Awards 2020” nokarakarain’ny Marketing Edge tany Nigeria izany. Continuer la lecture →
Sport	 11 novembre 2020 R Nirina
FONDATION AXIAN: Ho asiana toerana fanaovana fanatanjahantena isaky ny fokontany
Eny Anosibe Angarangarana no hisantarana ny fananganana toerana fanaovana fanatanjahantena eny anivon’ny fokontany. Amin’ny alalan’ny fiarahamiasa eo amin’ny Fondation Axian sy ny kaominina an’Antananarivo Renivohitra (CUA) no ahafahana manatanteraka izany. Continuer la lecture →